‘लभ स्टेशन मा जसिता फिक्स छैन’ : प्रदीप खड्का « Ramailo छ
‘लभ स्टेशन मा जसिता फिक्स छैन’ : प्रदीप खड्का
युवा स्टार प्रदीप खड्का फिल्म निर्माणमा उत्रिएका छन् । वितरक तथा निर्माता गोविन्द शाहीसँगको सहकार्यमा प्रदीपले निर्माण गर्ने फिल्मको नाम ‘लभ स्टेशन’ राखिएको छ । लभ स्टोरी जनराको यो फिल्मलाई कसले निर्देशन गर्लान् त ?
‘उज्जवल घिमिरे दाईले निर्देशन गर्ने पक्का भएको छ’, हाल ‘रोजी’ को छायाँकनमा रहेका प्रदीपले भने, ‘लिलिबिलीको ५१ दिनमा अनाउन्स गर्ने योजना थियो । न्यूज बाहिरी हालेछ ।’ फिल्मको नाम र निर्देशक बाहेक हाललाई अरु केही पनि पक्का नभएको प्रदीपले बताए । थुप्रै कमर्सियल हिट फिल्म दिएका निर्देशक घिमिरेले पछिल्लो पटक दिपकराज गिरी र दिपाश्री निरौलाको ‘वडा नं ६’ फिल्म निर्देशन गरेका थिए ।
‘मिडियामा हिरोइनको नाम पनि आएको रैछ, त्यो चाहिं होइन्’, प्रदीपको दाबी छ, ‘स्क्रिप्ट लक भएको छैन । निर्देशक बाहिर हुनुहुन्छ । त्यसैले हिरोइन पक्का भएको छैन । जसिताको पनि फिक्स छैन ।’ चर्चा अनुसार प्रदीपको लभ स्टेशनमा ‘लिलिबिली’ नायिका जसिता गुरुंग पक्का भएकी छन् । तर यसलाई प्रदीपले अफिसियल घोषणा भनेका छैनन् । प्रदीपको ‘लभ स्टेशन’मा को होलिन त हिरोइन ? फिल्मको स्क्रिप्ट चाहिं सुवास सिंह बस्नेतले लेखिरहेका छन् । प्रदीप र जसितासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :